Sida loo rakibo talaabada beta 12 Android talaabo talaabo ah | Androidsis
DaniPlay | | Tababarada, Noocyada Android
Beta-kii ugu horreeyay ee Android 12 mar hore ayuu inala wada jiraa oo leh astaamo cusub oo casiir leh, oo ay ku jiraan dib-u-qaabeynta is-dhexgalka cusub iyo astaamaha muhiimka ah. Kumanaan qof oo nasiib badan ayaa noqon doona kuwa ugu horreeya ee tijaabiya, maaddaama oo aysan dhammaan taleefannadu taageerin nooca laba iyo tobnaad ee nidaamka hawlgalka moobiilka ee Google. Baro sida loo rakibo Android 12 talaabo talaabo ah la casharkaan.
Ka dib seddex horudhac oo loogu talagalay horumariyeyaasha, Google wuxuu ku dhawaaqay nooca xiga ee dhacdada Google I / O wuxuuna sidaas ku sameeyay iyadoo rajo weyn laga qabo boodboodka weyn ee uu ka sameyn doono noocyadii hore. Horumarku wuxuu noqon doonaa marxalado gubanaya dhowr betas kaas oo sii deyn doona illaa nooca ugu dambeeya ee iftiinka arki doona bisha Ogosto.
Android 12 waxay balanqaadaysaa waxqabad wanaagsanKa sokow, isticmaalka processor-ka wuxuu noqon doonaa 22% wax ka yar taasna waxay suurtagal ku noqon doontaa in la ilaaliyo madax-bannaanid ka wanaagsan aalad kasta. Injineeradu waxay muddo dheer ka shaqeynayeen inay ka dhigaan nidaam adag oo sifiican ugu shaqeeya dhammaan codsiyada la heli karo.
2 Ma jiraan khatar marka la rakibayo Android 12?
3 Sida loo cusbooneysiiyo Android 12 beta
4 Hubi inaad hayso cusboonaysiinta
5 Sida loo rakibo Android 12 gacanta
6 Sida loo rakibo Android 12 qalabka Flash
7 Jadwalka cusboonaysiinta Android 12
Beta kasta oo ay sii deyso Google waxaa had iyo jeer taageera qalabka Pixel-ka shirkadda hadda jirta. Android 12 waxaa laga tijaabin karaa Pixel 3 wixii ka dambeeya, Pixels ka hor moodeelkan ma lahan wax suurogal ah oo lagu rakibo maadaama aysan taageero haysan.
Google wuxuu u oggol yahay soo saarayaasha kale inay rakibaan nooca cusub, xilligan la joogo inkasta oo ay qiyaastii toban yihiin haddana way sii kordheysaa inta lagu jiro betasyada kala duwan ee la bilaabay. Tan, waxaa suurtagal ah in la arko in waxa ay yiraahdaan ay u shaqeyn doonaan nooc aad u badan oo la safeeyey ee Android Ilaa hadda.
Telefoonada la wadaago Pixel waa sida soo socota:
Android 12 sidoo kale waa lagu rakibi karaa noocyada kale ee taleefannada caanka ah, oo ay ku jiraan ASUS, Oppo, OnePlus, Sharp, Realme, Vivo, TCL, Tecno, Xiaomi iyo ZTE. Sida Pixels oo kale, waxaa jiri doona dhowr nooc oo taageera beta ugu horreeya ee nooca, marka lagu daro, taleefannadii ugu horreeyay ee la jaan qaada ayaa lagu dhawaaqay waana kuwa soo socda:
Xiaomi: Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11I, Xiaomi Mi 11 Ultra iyo Xiaomi Mi 11 Pro
Fiiq - TBD
OnePlus: OnePlus 9 iyo OnePlus 9 Pro
Realme: in la go'aamiyo
Toos: iQOO 7 Legend
Oppo: Oppo Raadi X3 Pro
Google bogga horumarinta ee Android wuxuu xaqiijinayaa ugu yaraan taleefannada la sheegay, in kastoo la ballaarin doono sannadaha soo socda. Soosaarayaal badan ayaa haysta waqti ay ku xaqiijiyaan aaladaha awood u yeelan doona iyo ma awoodi doonaan inay ku rakibaan Android 12.
Ma jiraan khatar marka la rakibayo Android 12?
Iyagu way yar yihiin, in kastoo tan loo baahan yahay in la aqbalo halista soo degsashada iyo rakibida si loo bilaabo tijaabinta nooc aad u khaldan inkasta oo uu ku jiro beta. Google wuxuu sii deyn doonaa betas badan, sidaa darteed waxaa lagugula talinayaa inaad aragto kuwa ugu horreeya kadib noocyada hordhaca ah.
Xirmada cusbooneysiinta waxaa lagu soo dejinayaa iyadoo la adeegsanayo kumbuyuutar, ka dibna loo wareejinayo fiilada USB-ga ee lagu keydiyo taleefannada casriga ah. Nuqul dhammaan macluumaadka ayaa loo baahan yahay si aan waxba loo waayin Jidka, ha ahaato sawirro, fiidiyowyo iyo dukumiintiyadaas muhiimka ah.
Waxaa lagugula talinayaa inaad ku wareejiso dhammaan xogtan kombiyuutarka, Ikhtiyaar kale ayaa ah inaad u daadiso macluumaadka adeegyada kale, kuwaas oo ay ka mid yihiin Google Drive, Terabox, iyo kuwo kale. Abuur galka si aad wax walba ugu habeyso, si aad hadhow ugu wareejiso mobiilka si dhaqso iyo nidaam leh.
Sida loo cusbooneysiiyo Android 12 beta
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad gasho bogga internetka barnaamijka Android Beta, Fariinta markey gasho waxay leedahay: «Naga caawi si nooca xiga ee Android uu ugufiican yahay taariikhda». Tijaabadu waa lama huraan haddii aad rabto inaad saxdo cilladaha, beta-ka ugu horeeya maahan mid hagaagsan kuwa badanna waa kuwa awooda inay soo diraan qalad kasta oo ay arkaan usbuucyada isticmaalka oo dhan.
Guji "Saxeex" si aad uguqorto beta-ka koontadaada Google, waxaa lagugula talinayaa inaad ku sameyso midka ugu weyn oo isla waxii dambe ayaa dhici doona. Haddii aad horeba uga soo qayb qaadatay barnaamijka beta waa wax fiican isticmaal isla akoon isla markaana aanad adeegsan mid kale, markaa waa inaad ku biirtaa isla emaylka.
Tan koowaad waa hubi haddii qalabkaagu ku habboon yahay Marka la cusbooneysiinayo, ugu yaraan mid ka mid ah taleefannada ku jira liiska ayaa loo baahan yahay, nooc kale ayaan ansax ahayn. Google ayaa markaa awoodi doonta inay qaado talaabo muhiim ah oo dhab ah hadaad ku guuleysato inaad xirato sidoo kale suurogal inaad cusbooneysiiso mustaqbalka.
Boggu wuxuu ku weydiin doonaa inaad aqbasho shuruudaha isticmaalka si loo dhammaystiro diiwaangelinta, markaa waa muhiim in sidaas lagu sameeyo waqti badan. Qiyaastii maalin waxaad heli doontaa cusbooneysiin ah Beta sida haddii aad ka boodday cusbooneysiinta qalabka.
Hubi inaad hayso cusboonaysiinta
Marka aad codsato inaad cusboonaysiiso beta waa lagugula talinayaa gacanta ku hubi haddii aad heshay beta-kii ugu horreeyay ee Android 12Sameynta gacanta marwalba waa lagugula talinayaa. Mararka qaar kama dhigeyso otomaatig, sidaa darteed waxaa ugu wanaagsan in la raadiyo oo haddii aad haysato, raac tallaabooyinka aad ugu qaadanayso tan laba iyo tobnaad.
Tallaabooyinka lagu hubinayo cusbooneysiinta waxaa loo sameeyaa sida soo socota:
Hadda guji System ka dibna ku dhufo Advanced
Dhammaad dhagsii "Cusboonaysiinta nidaamka" oo waxay ku raadin doontaa wax ka yar daqiiqad, haddii aysan jirin waxaa ugu wanaagsan in yar la sugo dhowr saacadood
Sida loo rakibo Android 12 gacanta
Xulashada gacanta ayaa laga yaabaa inay tahay tan ugu adagIyadoo ay taasi jirto, waa mid ka mid ah kuwa loo isticmaalo beddelka kan rasmiga ah. Tan awgeed, codsi loo yaqaan Flash Tool ayaa loo isticmaalaa, waa bilaash waana inaan raacnaa dhowr tallaabo haddii aan dooneyno inaan ku rakibno Android 12 aaladda waqti uu arjiga calaamadeyn doono.
Qalabka Flash waxaa loo yaqaanaa inuu yahay aaladda saxda ah haddii aad rabto inaad rakibto mid ka mid ah noocyada Android, laakiin xusuusnow inaad hubiso haddii ay ku jirto liiska qalabka la taageeray. Xilligan la joogo inkasta oo ay yihiin dhawr moodel wuu kordhi karaa iyadoo kuxiran saaraha.
Tallaabooyinka lagu soo dejinayo Flash Tool iyo Android waa sida soo socota:
Soodejiso Qalabka Flash ka bogga rasmiga ah
Hada ka soo dejiso Android 12 bogga Soosaaraha Android oo raac talaabooyinka loogu talagalay rakibideeda dambe ee leh Qalabka Flash Android
Haddii aad rabto inaad aragto taleefannada iswaafajiya iyo tallaabooyinka ay fulinayaan soo saare kasta, waxa ugu fiican ayaa ah booqo shabakadda Google u kartiisay tan, tan darteed xusuusnow inay tahay inay ahaato mid moobil ah oo socon kara, muhiimna u ah
Sida loo rakibo Android 12 qalabka Flash
Waa muhiim in la sameeyo gurmad ka hor inta aan la rakibin Android 12 qalabkaaga, xusuusnow inaad isticmaasho kombuyuutarkaaga ama aalad aad isku duubto wax kasta oo aad haysatay illaa heerkaas. Fiilooyinka USB-ga waxaad ku dhoofin kartaa gacanta, halka haddii aad isticmaasho Google Drive aad keydin karto illaa 15 GB macluumaad ah.
Si aad ugu rakibto Android 12 Qalabka Flash Samee waxyaabaha soo socda, xusuusnow inaad u raacdo warqadda si ay u shaqeyso oo nooca cusub loogu rakibo mobilka:
Soo dejiso feylka Flash Tool ka socota Android Developer
Ka hawlgal xulashooyinka horumariyaha taleefankaagaSi tan loo sameeyo, u gudub Settings - Ku saabsan taleefanka - Dhis nambarka - kuna dhufo nambarka dhismaha wadar ahaan toddobo jeer, marka aad sameyso, waxay ku tusi doontaa farriin fariin ah oo ku saabsan Ikhtiyaariyada Developer
Ku xir taleefanka kombuyuutarka adoo adeegsanaya fiilada USB-ga oo fur konsole amarka
Fur faylka la soo dejiyey kombiyuutarkaaga
Si aad u bilawdo, ku kali faylka magaca flash.all oo raac tallaabooyinka lagu rakibayo Android 12 taleefankaaga daqiiqado gudahood, hawshu waxay qaadan doontaa in ka badan ama ka yar waqti aan ka badnaan doonin 10 daqiiqo
Jadwalka cusboonaysiinta Android 12
Beta-kii ugu horreeyay ayaa la heli jiray maalmo yar, kan labaadna si dhakhso leh ayaa loo sii deyn doonaa, sidaa darteed sixitaanka iyo warar dheeraad ah ayaa lagu arki doonaa inta lagu jiro cusbooneysiinta. Waxaan horeyba u haysanay taariikh loogu talagalay betas-ka xiga, nooca musharraxa iyo nooca ugu dambeeya, oo arki lahaa iftiinka bisha Ogosto.
Google waxay rabtaa tan si loo hormariyo qaab aad u dhakhso badan, badbaado leh oo cusbooneysiin ah, oo leh interface oo xilligan ka duwan wixii aan aragnay ilaa hadda. Jadwalka loogu talagalay cusbooneysiinta soo socota waxay noqon doontaa sidan soo socota, oo ku kala duwan hadba haddii Google gaaro iyaga:
Juunyo: beta-kii labaad ayaa la soo bandhigi doonaa isla bishaas, ka hor dhammaadka bishan
Luulyo: Google waxay bilaabi doontaa beta 3 bisha Luulyo, maalin aan weli la xaqiijin Google
Toddobaadyada ugu horreeya ee Ogosto: Shirkaddu waxay soo saari doontaa beta 4, waxay imaan doontaa bil go'aan ah, gaar ahaan maxaa yeelay waxaa jira warar badan oo ku saabsan barnaamijka
Ogosto: nooca loo yaqaan musharax wuxuu imaan doonaa beta 4 kadib, waa waqtigii la arki lahaa sida ay u egtahay
Kahor dhammaadka bisha Ogos: kahor dhammaadka bisha nooca waa la sii deyn doonaa, nooca ugu dambeeya, oo aan ku arki doonno taleefannada Pixel ka dibna noocyada taleefannada, laakiin leh lakabka shakhsi ahaaneed ee mid kasta oo ka mid ah
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Noocyada Android » Sida loo rakibo barnaamijka 'beta 12 beta' talaabo talaabo ah